Sida ugu wanaagsan suuqgeynayaashu ay u tayayn karaan xayaysiisyadooda wax iibsiga ee Google | BehMaster
Bogga ugu weyn/E-commerce/Sida ugu wanaagsan suuqgeynayaashu waxay u tayayn karaan xayaysiisyadooda Shopping Google
Sida ugu wanaagsan suuqgeynayaashu waxay u tayayn karaan xayaysiisyadooda Shopping Google
Goobta ganacsiga dhijitaalka ah ayaa si xawli ah u koraysa, suuqeeyayaashana dhammaan warshadaha ayaa raadinaya siyaabaha ugu waxtarka badan ee ay kor ugu qaadi karaan ololahooda wax iibsiga. Qaar badan oo ka mid ah ayaa si dabiici ah u aaday wax iibsiga Google, mid ka mid ah goobaha wax iibsiga ee ugu weyn ee ay heli karaan baarayaashu.
Si kastaba ha ahaatee, u raridda ololahaaga wax iibsiga ee Google kuma filna in lagu guuleysto; Suuqgeeyayaashu waxay u baahan yihiin inay xaqiijiyaan quudintooda wax iibsiga in loo hagaajiyo raadinta.
"Kama fogaan karno mawduucan quudinta quudinta marka aan ka hadlayno ololayaasha wax iibsiga," ayuu yiri Anastasia Sorokina, oo ah agaasimaha SEM ee shirkadda wax-qabadka ee WITHIN, iyada oo soo bandhigtay SMX Next. "Kahor intaadan bilaabin ololahaaga wax iibsiga, waxaad dooneysaa inaad hubiso inaad raacdo dhammaan hababka ugu wanaagsan iyo shuruudaha Google si aad u hubiso in quudintaadu u taagan tahay meel wanaagsan."
Si la mid ah ololayaasha raadinta organic ama lacagta la bixiyo, suuqeeyayaashu aad bay u guulaysan doonaan haddii ay u hoggaansamaan tilmaamaha Google iyo, ka sii muhiimsan,, abuuraan xayeysiis buuxiya baahiyaha baadhayaasha. Halkan waxaa ah shan siyaabood oo ay summadaha u tayayn karaan xayaysiisyadooda Shopping Google.
Isticmaal jumlado aad u khuseeyo marka aad ku jirto ciwaannada xayaysiiska iyo sharraxaadaha wax iibsiga
"Mid ka mid ah waxyaabaha ugu horreeya ee aan had iyo jeer ku eegno quudinta alaabtayada waa cinwaanno iyo sharraxaad," Sorokina ayaa yidhi. "Waxaad u baahan tahay in si wanaagsan loo hagaajiyo, magacyo si wanaagsan loo qoray iyo sharraxaadyo. Kaliya maaha in Google uu isticmaalo si uu u waafajiyo xayaysiimahaaga wax iibsiga iyo waydiimaha raadinta la xidhiidha, laakiin sidoo kale waa fursadaada inaad soo bandhigto astaantaada oo aad gaadhsiiso fikradaada qiimaha leh.
"Ku dheji sifooyinka ugu qiimaha badan ee alaabtaada oo ku xir faahfaahinta bilowga," ayay raacisay.
Xigasho: Anastasia Sorokina
Abuuritaanka cinwaannada xayeysiiska wax iibsiga ee khuseeya - oo muujinaya ereyada muhiimka ah ee ugu muhiimsan bilowga - waa hab wax ku ool ah oo lagu tuso baadhayaasha wax-soo-saarkaagu ku habboon yahay baahiyahooda laga bilaabo tagitaanka. Sidoo kale waa qayb muhiim ah oo ka mid ah algoorithmamka iswaafajinta Google.
Sharaxaadaha liiska wax iibsiga, suuqgeynayaashu waxay muujin karaan sifooyin alaab oo gaar ah. Marka laga reebo in lagu daro ereyada muhiimka ah ee khuseeya, calaamaduhu waa in ay muujiyaan tayada alaabta gaarka ah si ay u sii sasabtaan macaamiisha.
U dooro muuqaalada tayada sare leh, la hagaajiyay ee quudintaada
"Xayeysiisyada wax iibsiga waxay bixiyaan waayo-aragnimo qani ah oo muuqaal ah, waxaana muhiim ah in la isticmaalo sawirada tayada ugu fiican ee soo bandhigaya alaabtaada sida ugu wanaagsan ee suurtogalka ah," ayuu yiri Sorokina. "Waa inaad isticmaashaa sawirro tayo sare leh, adigoo raacaya hab-dhaqanka Google ugu fiican iyo hab-raacyada cabbirrada qaabka."
Waxyaabaha muuqaalku waa qaar ka mid ah sifooyinka ugu muhiimsan ee xayeysiisyada wax iibsiga; waxay awood u leeyihiin inay sameeyaan ama jabiyaan ololeyaal ku salaysan heerkooda tayada. Si loo hubiyo in sawirada xayaysiisyadu ay buuxiyaan shuruudaha Google iyo macaamiisha, kuwani waa qaar ka mid ah shuruudaha ugu yar ee sawirka Google Merchant Center (GMC):
Faylasha sawirku waa inay ka yar yihiin 16MB.
Sawiradu waa inay si sax ah u muujiyaan alaabta oo dhan.
Sawiradu waa inay muujiyaan dhammaan alaabta ku jirta xidhmada
GMC waxa kale oo ay siisaa suuqlayda hababka ugu wanaagsan ee lagula taliyay si ay u horumariyaan xayaysiisyadooda:
Sawiradu waa inay matalaan tafaasiisha kala duwanaanshaha badeecad kasta.
Sawiradu waa inay isticmaalaan xalka ugu sarreeya ee la heli karo.
Alaabuhu waa inay qaataan wax aan ka yarayn 75%, laakiin aan ka badnayn 90%, sawirka buuxa.
Sorokina ayaa sidoo kale xustay in suuqleydu ay ku dari karaan ilaa 10 sawir xayeysiisyadooda wax iibsiga. Tani waxay u oggolaanaysaa summadaha inay soo bandhigaan aragtiyo kala duwan oo alaabooyin ah si ay macaamiisha u siiyaan khibrad aad u adag.
"Tani waa mid dhowaan soo kordhay mana ahan suuqgeyn badan oo ka faa'iideysanaya," ayay tiri. "Waa hab aad u wanaagsan oo lagu soo jiito dareenka macaamiisha suurtagalka ah oo lagu soo bandhigo alaabtaada goobo iyo xaglo kala duwan. Waxay kaa caawin doontaa qiimaha gujintaada iyo suurtogalnimada heerka beddelkaada."
Hubi in sifooyinka loo baahan yahay ay jiraan
"Waxaa jira sifooyin dhowr ah oo Google uu kaaga baahan yahay inaad ku darto quudkaaga wax iibsiga, haddii kale ma awoodi doontid inaad soo gudbiso quudinta meesha ugu horeysa," Sorokina ayaa yidhi. "Kuwaan waxaa ka mid ah aqoonsiga shayga, cinwaanada summada, sharraxaadaha, iyo helitaanka."
Suuqgeeyayaashu waa inay ku buuxiyaan sifooyinkan xogta ugu saxsan ee suurtogalka ah si ay xaq ugu yeeshaan wax iibsiga, laakiin waxa jira dhawr qiimeyaal ikhtiyaari ah oo ay tahay in la tixgeliyo isticmaalka sidoo kale. Sifada qaybta badeecada, gaar ahaan, waxay u ogolaataa summadaha inay bixiyaan calaamado kala soocid guud oo badan Google iyo isticmaalayaasha.
Waa kuwan sifooyinka kale ee ikhtiyaariga ah ee suuqgeynayaashu waa inay tixgeliyaan wanaajinta:
Xiriirinta sawirka dheeraadka ah.
Taariikhda la heli karo
Qiimaha alaabta la iibiyo.
Taariikhda uu dhacayo.
Qiimaha iibka taariikhda dhaqan galay.
Ku dar sifado dheeri ah si aad uga dhex muuqato tartamayaasha
"Inkasta oo xayaysiisyadaadu ay si wanaagsan u qoran yihiin, la hagaajiyey, cinwaano iyo tilmaamo la xidhiidha iyo muuqaalo indho-qabad leh oo tayo sare leh, way adagtahay in la soo baxo - waxaa jira tartan badan," ayuu yidhi Sorokina.
Google's Promotions Merchant wuxuu bixiyaa sifooyin badan si ay u caawiyaan summadaha inay gaaraan heerka xiga ee xayeysiinta wax iibsiga. Suuqgeeyayaashu waxay muujin karaan qiimo dhimis, dhoofin bilaash ah ama qiimo dhimis ah, hadiyado wax iibsiga iyo meelaha kale ee wax iibinta ee gaarka ah si ay u kala soocaan summadahooda tartamayaasha.
"Horumarinta Ganacsatadu waa hab fiican oo lagu soo bandhigo dalabyadaada, taasoo suurtogal ah in kor loo qaado heerka gujinta marka macaamilku arko," Sorokina ayaa yidhi. "Ma aha kuwo aad u adag in la dejiyo, laakiin waxaa jira shuruudo gaar ah, gaar ahaan marka ay timaaddo sida aad u muujiso qiimo dhimista boggaaga, iyo habka hubinta ayaa sidoo kale muhiim ah."
Sorokina waxa kale oo ay soo jeedinaysaa ka faa'iidaysiga sharraxaadda Shopping Google, summada iswada-abuuray ee siinaya baadhayaashu macnaha badan oo ku saabsan alaabtaada: "Waxyaabaha sida qiimaha hoos u dhaca, summada dhoofinta bilaashka ah iyo degdegga ah - kuwani way ka duwan yihiin Horumarinta Ganacsiga sababtoo ah si toos ah ayay u shaqeeyaan. Google ayaa si toos ah u soo saarta calaamadahan qiimaha, taas oo kuu ogolaanaysa inaad wacdo qaar ka mid ah alaabooyinka la iibinayo.
Waxay ku talinaysaa in suuqleydu ay awood u yeeshaan xayeysiisyada agabka gudaha haddii ay khuseyso. Waxay u isticmaali karaan inay horumariyaan agabka bakhaarka dhexdiisa ama heshiisyada alaabta laga soo qaaday bakhaarka.
Calaamaduhu waxay sidoo kale ka faa'iideysan karaan dib u eegista internetka iyagoo muujinaya qiimeynta alaabta ee xayeysiisyada wax iibsiga. Kuwani waxay kaa caawin karaan muujinta alaabtaada aadka loo qiimeeyo.
U diyaari isbeddellada ganacsiga dhijitaalka ah ee mustaqbalka
Imaanshaha tignoolajiyada cusub iyo xeerarka qarsoodiga macaamiisha ayaa horseedaya isbeddellada ganacsiga dhijitaalka ah. Si loo sii tartamo, suuqlaydu waa in aanay ka warqabin isbeddelladan soo baxaya oo kaliya balse ay si joogto ah u tijaabiyaan xayaysiisyada wax iibsiga si ay u helaan xalalka ugu wanaagsan ee socda.
"Waxaan haysanaa caqabado xiiso leh oo lagu soo bandhigay nidaamka deegaanka [dukaynta]," ayuu yidhi Basheer Bergus oo ka tirsan Growphoria isla bandhiga. "Waxaan aragnaa xakameyn yar oo loogu talagalay xayaysiiyayaasha marka loo eego xogta iyo macluumaadka ay ka warbixin karaan. Waxaan aragnaa xaddidaadyo gaar ah oo xogta ah iyo automation dheeraad ah."
"Waxaa nagu waajib ah xayeysiiyeyaal ahaan inaan sii wadno tijaabinta iyo ku celcelinta, laakiin sidoo kale inaan ogaano sharciyada kala duwan ee laga yaabo inay noqdaan kuwo gudaha, qaran ama caalami ah. Waxaan u baahanahay inaan hubinno inaan heli karno xogta ugu badan ee aan awoodno laakiin sidoo kale u hoggaansanno sharciga,” ayuu raaciyay.
Xigasho: Basheer Bergus
Dakhliga e-ganacsiga ayaa sii kordhaya iyadoo la kordhinayo kanaalada suuq-geynta dhijitaalka ah, sidaa darteed noocyada aan wanaajin xayeysiisyadooda wax iibsiga ayaa laga yaabaa inay maqan yihiin. Liisaska alaabada bilaashka ah iyo sifooyin kale oo cusub oo ku jira aaladaha sida Google Shopping ayaa u fududeeyay summada inay galaan nidaamka deegaanka ganacsiga dhijitaalka ah sidii hore.
"Markaan eegno mustaqbalka xayaysiisyada wax iibsiga, waxa aan aragno waa inay sii yaraanayaan marka la eego kor u kaca iyo socodka," Bergus ayaa yidhi. "Caqabadda soo gelitaanka nidaamka deegaanka ee xayeysiiska ayaa aad loo fududeeyey."
"Mustaqbalka xayeysiisyada wax iibsiga ayaa u muuqda mid aad u adag," ayuu raaciyay.
Halkan ka daawo bandhigga xiga ee SMX oo dhammaystiran (Diiwaangelin bilaash ah ayaa loo baahan yahay).
Maxaad ugu baahan tahay Goob-raadinta
Google, Microsoft Cusbooneysii Xayeysiisyada Xayeysiiska, Dabagalka Hogaaminta, Waxbadan